HTC ga-ewepụta ekwentị igwefoto abụọ na 2018 | Androidsis
2017 abụrụla afọ juputara na mgbago na mgbada maka HTC. Ụlọ ọrụ Taiwan ahụ enwetala nnukwu nsogbu na ngalaba ekwentị ya. Ọrịre abụghị nke kacha mma, n'agbanyeghị ịmalite ekwentị zuru oke. Ma, ọ dị ka nke nta nke nta ka ọnọdụ ụlọ ọrụ ahụ na-agbake. N'oge a, n'izu a anyị maara na Ndụ U11 HTC.
Ụlọ ọrụ ahụ ugbu a na-eme atụmatụ mwepụta ya maka afọ 2018. Atụmatụ gị agabiga malite ihe dị ka ekwentị 5 ma ọ bụ 6 gaa n'ahịa n'afọ ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, e nwekwara akụkụ ọzọ ha na-atụle ogologo oge. Nlaghachi na igwefoto okpukpu abụọ. N'ikpeazụ, HTC n'onwe ya kwadoro nke ikpeazụ.
Ọtụtụ nwere ike ha amaghị ya, mana mbinye aka so na ndị mbụ weputara ekwentị igwefoto abụọ gaa n'ahịa. Ịbụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ bụ ihe ha kwụsịrị ịkwụ ụgwọ. Ebe ọ bụ na arụpụtaghị ihe a tụrụ anya ya. N'ihi nke a, mgbe obere oge gasịrị, a manyere ha laghachi na otu oghere igwefoto. Ya mere na-ejedebe njem ya na igwefoto abụọ.
Ma, ugbu a ọtụtụ ekwentị ndị dị elu nwere igwefoto nwere igwe abụọ. Nke nta nke nta ọ na-aghọ ihe a chọrọ maka ọtụtụ ụdị. Ọ bụ ya mere anyị ji ahụ ka ọnụ ọgụgụ smartphones nwere igwefoto abụọ na-abawanye nke ukwuu. N'ihi, HTC emeela mkpebi ịlaghachi na igwefoto abụọ na 2018.
Nke Onye isi oche nke ngalaba ekwentị ụlọ ọrụ ekwenyela na akụkọ a. Ọ bụ ezie na nkwupụta ya ejekwara ozi ịhụ obi abụọ dị n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na mgbe atụmatụ HTC gụnyere ịmalite ekwentị igwefoto abụọ, ha amachaghị nke ọma ka ha ga-esi nweta nke ahụ. Ha ga-achọ ụzọ ha ga-esi mee ka igwefoto ha abụọ pụta ìhè na ụdị ndị ọzọ.
Ka ọ were ụlọ ọrụ ahụ na-eche ihe ịma aka ihu nke ukwuu. N'iburu n'uche na nkewa telephony ya bụ nke Google nwere ugbu a, ihe na-adọrọ mmasị nwere ike ịpụta na usoro a. Anyị ga-echere afọ na-abịa Mara ekwentị HTC ọhụrụ a nwere kamera abụọ. Ọ bụ ezie na obi abụọ adịghị ya na ha agaghị adị mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC iji weghachite ekwentị igwefoto abụọ na 2018
OPPO R11S na-agbaji ndekọ akwụkwọ na ụbọchị mbụ ya